राष्ट्रपति भएको भोलिपल्टै गोली हानी हत्या
भारतमा एकैदिन २ लाख ९४ हजारमा संक्रमण
जिपको ठक्करबाट चितवनमा पैदलयात्रीको मृत्यु
आजको राशिफल : २०७८ साल वैशाख ८ गते बुधबार
डोटीमा कुहिएको अवस्थामा महिलाको शव फेला
प्रतिव्यक्ति रु ९ हजार लिएर नक्कली पीसिआर रिपोर्ट बनाउने ८ जना पक्राउ
विश्वकपका लागि ९ रङ्गशाला प्रस्तावित
साउनको सोमबार शिवालयमा जल चढाउने कार्यक्रम कोभिड–१९ को महामारीको कारण प्रभावित भएको छ । साउन महिनाको पहिलो सोमबार आज झापाको अर्जुनधारामा रहेको शिवालयमा अरु बेलाको जस्तो घुइँचो छैन । अधिकांश भक्तजनले आफ्ना घरमै पूजा सम्पन्न गरेको तथा थोरै मात्र शिवालय मन्दिरमा पुगेका छन् ।
‘पूर्वको पशुपतिनाथ’ अर्जुनधारा जलेश्वरधामको प्रवेशद्वार आज बिहान करीब तीन घण्टा मात्र खुलेको छ । धाम व्यवस्थापन समितिका कोषाध्यक्ष मनोज जोशीका अनुसार आज बिहान ४: ३० बजे नित्य पूजाका लागि प्रवेशद्वर खुला गरिएको तथा तीन घण्टापछि ७:३० मा बन्द गरिएको थियो ।
धाम समितिले केही दिनअघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गरी कोरोना महामारीका कारण साउनमा मन्दिर खुला नरहने जानकारी दिएको थियो । विगतमा साउने सोमबार शिवको पूजा गर्न अर्जुनधारा जलेश्वर धाममा लाखौँ भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गरेको थियो । धाममा मूल पूजारीले विशेष पूजा गर्ने समयमा आज बिहान प्रवेशद्वार खुला हुँदा आइपुगेका केही सर्वसाधारणले पूजाको अवसर पाएका थिए ।
मन्दिरको प्रवेशद्वार बन्द गरिए तापनि सयौँ भक्तजनले मन्दिर बाहिर रहेको नाग मन्दिरमा जल चढाउन थालेको समितिका कोषाध्यक्ष जोशीले बताए । झापाका मेचीनगर, भद्रपुर, कन्काई, बिर्तामोडलगायत क्षेत्रमा रहेका शिवालय मन्दिरमा आज भक्तजनको सङ्ख्या न्यून छ । पूजा गर्न आउनेले मास्क लगाएर सामाजिक दूरी कायम गरेका छन् ।
विवादमा मुछिएका नायक किशोर खतिवडाद्वारा आत्महत्या प्रयास ?
वैशाख ८ गते, अनिवार्य गर्नुस यो एक कार्य फलिफाप हुनेछ !
चर्चामा प्रियंकाको बेबी बम्प (फोटो फिचर )
के ऐश्वर्या दोस्रो सन्तानको आमा बन्दैछिन् ?
एउटै विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थी गरी ३९ जनामा कोरोना संक्रमण
दियो बाल्दा यस्ता संकेत देखिए, चम्किदैछ तपाईँको भाग्य !
‘विद्यालय पठाइरहे परिवार नै “सखाप” हुन सक्छ’
भोली चैते दशैं, यो एक काम अवश्य गर्नुस